Maqal: Duqa Boosaaso “Ganacsatada iyo dadweynaha Shanta Boqol waa in la qaataa” – SBC
Maqal: Duqa Boosaaso “Ganacsatada iyo dadweynaha Shanta Boqol waa in la qaataa”
Lacagta Shanta Boqol ee Shilin Somaaliga ah ayaa beryihii ugu danbaysay waxa uu Suuqyada Magaalada Boosaaso ka ahaaa Mid lagu kala aragti duwanyahay Qaadashadeeda .
Hadaba Shir looga hadlaaya Arintaan ayaa maanta waxa uu ka dhacay xarunta Dowlada hoose khaasatan Xafiiska Duqa Degmada Boosaaso kaas oo ay ka soo qeyb galeen Ganacsatada Ku dhaqan Magaalada iyo Maamulka Gobolka .
Duqa Degmada Boosaso Xasan Cabdall Xasan oo si gaaara u lahadlaayey Warbaahinta Sbc ayaa ugu horeyn ugu warbixiyey Kulankaan iyo wax yaabaha looga hadlay isagoona ka dhawajiyey in ay ganacsatada kala hadleen arimo ku aadan dhinacyada ganacsiga iyo sarifka lacaga iyadoona dhanka kale ganacsatada loo sheegay in ay san jirin sharci ay dowladu ku mamnuucayso Lacagta shilinka Soomaliga ah loona baahanyahay in la qaato oo aan dadka lagu celin .
“Lacagta shanta Boqol maaha mid ay Dowlada diiday waa waxyaabo aanu fahmi weynay wax kenay marka waa in la qataa lacagtaas” Ayuu yiri Duqa Degmada Boosaaso.
Mar ay Warbaahinta Sbc wax ka weydiisay Duqa Saameyta ay ku yeelan karto dhanka Dhaqaalaha In Dowlada ay lacagti Canshuubta ay qaadi jiratay ka dhigto Doolarka Mareykanka ah ?.
“Lacagta Soomaliga ah ma loo isticmaali jirin oo keliya in lagu bixiyo canshuurta ee lacagtaani waa lacagtii wadanka waana lacagta rasmiga ah ee dalka waxaana loo isticmaali jiray wax walba oo wareeg lacageed ah ” Xasan Cabdalle Xasan ayuu ku jawaabay
Dhanka kale Duqa ayaa ka dhawaajiyey in Cidii ka dhega adeygta Amankaan ay ha,adaha Amuurahaan ku shaqada lihi ay talaabo sharci ah ka qaadayaan .
Ugu danbeytii Duqa ayaa ugu baaqey Ganacsatada ku dhaqan Magaalada Bosaaso in ay Qaatan lacagta Shanta Boqol ee Shilin Soomaaliga ah Dadkana aysan ku dhibin arintaas.
“Waxaan ugu baaqayaa Bulshada Kudhaqan Magaalada in ay arinta sideedii u daayaan Ganacsiga aan la xayirin ee lacagta siday u waregi jirta ay ahaato oo la qato Shanta Boqol ee Shilinka Soomaaliga ah ” waa baaqii Duqa Magaalada Boosaaso.
Arintaan ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa xili ay Wasaarada Maaliyada Puntland ay ka dhaqwaajisay in Cashuurtii ay Dowladu qaadi jirtay Laga Dhigay in lagu qaado Lacagta Doolarka Mareykanka.
Waxana ay Dadku Ku doodayaan in Lacagta Shanta Boqol ee Shilin Somaaliga ah ay ku bixin jireen Cashuuraha lakiin haatan aan laga Qaadanayn.
DHAGEYSO Warbixin uu ka diyaariyay wariye Ibraahim warkan . DHAGEYSO WARIXINTA